एक बालक जो आफुलाई चौबीसै घण्टा कुटिरहन्छ, पीडापछि पिताले गरे आत्महत्या ! [ यसरी आफुलाई कुटिरहन्छ भिडीयो ] - Kendra Khabar
२०७५, १७ पुष मंगलवार ०५:५६
छोरालाई लागेको अस्वभाविक रोगले बुबाले आफ्नो पीडा पखाल्न स्वयं आफुलाई सप्तकोशी नदीमा समाहित गरे । एउटा गरीब परिवारमा जन्मिएको एक बालकले लामो समयदेखि अस्वभाविक हर्कत देखाउँदै आएको छ । उपचारको लागि धेरै प्रयास भए, धेरै धामी झाँक्रीहरु लगाइए, अनगिन्ती देवी देवता भाकिए । तर आफ्नो छोराको रोगको न फेद न टुप्पो पत्ता लागेपछि पिताले कोशीमा हामफालेर आत्मदाह गरे ।
एउटा गरीब परिवारमा आइपरेको विपत्ति निरन्तर छ । सुनसरीको रामधुनीका ११ बर्षीय प्रदीप ढकाल जो जो आफैलाई कुटी रहन्छन् । २४ घण्टामा मुश्किलले एक घण्टा मात्र सुत्ने गरेका प्रदीपको यो हर्कतले सबै परिवार गहिरो पीडामा छन् ।
मुड्कीले आफ्नो अनुहार र शरीरका बिभिन्न भागमा कुटिरहने गर्दा उनका अनुहार र शरीरमा जताततै निलडाम र टुटुल्कोहरु देख्न सकिन्छ । के रात के दिन उनि यसरी आफैले आफैलाई कुटी रहन्छन् आफैलाई कुटेर नै उनको अनुहार सधै सुन्निएको र निलो डाम हुन्छ । राति समेत उनि १ घण्टा मात्र सुत्छन् र निरन्तर आफैलाई चोट दिइरहन्छन् ।
छोराको यही पीडा सहन नसकेर केहि महिना अघि उनका बाबुले आत्महत्या गरेको उनकी आमा मन्दिरा ढकाल बताउछिन् । नातीको अवस्था यस्तो भए पछि थोरै भएको जग्गा जमिन समेत धितो राखेर उपचार गरे पनि रोग पत्ता नलागेको उनका हजुरबुबा बताउछन् ।
चिकित्सकका अनुसार बालबालिकामा यस्तो खालको समस्या फाट्टफुट्ट देखिदै आएको छ । महिनामा एक दुइ वटा घटना यस्तो आउने कान्ति अस्पतालले जनाएको छ । कतिपय बालबालिकाहरु हातको औला टोकेर ओलै गुमाइसकेको अवस्थामा समेत आउछन्। कान्ति अस्पतालका बाल मानसिक रोग बिशेषज्ञ डा अरुण कुवरका अनुसार यो सिबियर मानसिक अपांगता हो ,यसमा यसरी आफैले आफुलाई चोट दिंदा उनीहरु आनन्दको महसुस गर्छन् ।
यस्ता बालबालिकाको लागि नेपालमा बिद्यालय वा केयर सेन्टर नहुँदा उनीहरुलाई हेर्ने अभिभाबक नै डिप्रेसनमा जाने चिकित्सक बताउछन् । यस्ता समस्या भएका बालबालिकालाई नेपाल मै उपचार सम्भब रहेको र अभिभाबकलाई पनि कसरी हेरविचार गर्ने भनेर तालिम दिन आवश्यक रहेको चिकित्सक बताउछन् । ढकाल परिवारले जस्तै समस्या भोग्ने धेरै छन्, जसले सन्तानलाई बाँधेर, थुनेर राख्छन् । तर, निको हुने यो रोगको उपचार नेपालमै संभव छ भन्ने जानकारी नहुँदा र उपचारमा पहुँच नपुग्दा अधिकांश अभिभावक तनावमा छन् ।
घरमा पाइने माउसुली बिएमड्ब्लू कारभन्दा महंगो ! जान्‍नुस कसरी ….
प्रमाण नपुगेको भन्दै अख्तियारले बाँस्कोटामाथिको मुद्दा तामेलीमा राख्ने
गण्डकीमा थप १८ जनामा कोरोना संक्रमण